नेपालको एयरपोर्टमा म हात्ती पनि छिराईदिन्छु भन्न यी ब्यक्ती को हुन् ? (पुरा हेर्नुहोस् ) l – Enepali Samchar
नेपालको एयरपोर्टमा म हात्ती पनि छिराईदिन्छु भन्न यी ब्यक्ती को हुन् ? (पुरा हेर्नुहोस् ) l
April 2, 2021 adminLeaveaComment on नेपालको एयरपोर्टमा म हात्ती पनि छिराईदिन्छु भन्न यी ब्यक्ती को हुन् ? (पुरा हेर्नुहोस् ) l
e nepaalisamchawr/ काठमाडौं ।विकिनी किलर चार्ल्स शोभराज सन् १९६३ देखि १९६७ सम्मको अवधिमा श्रृंखलाबद्ध हत्यामा कुख्यात अपराधी हुन् । त्यसवेला उनी ११ मुलुकका प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा थिए र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चाको केन्द्रमा थिए ।
कहिले जेलमै विवाह त कहिले मुटुको शल्यक्रियाका कारण चर्चामा आउने उनी हालै बेलायती सञ्चार माध्यम मिरर र डेलिमेलमा ‘आफू निर्दोष रहेको र तीनदेखि चार हप्तामा छुट्न लागेको’ भन्दै अन्तरवार्ता दिएपछि चर्चामा छन् । उनले आफूलाई अवैधरुपमा जेलमा राखिएको भन्दै झण्डै एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको समेत बयान दिएका छन् ।
कारागारमा छानविन : शोभराजबारे बेलायती पत्रिका मिररमा सामग्री प्रकाशित भएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि चासो देखाएको छ । विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेल भन्छन्, ‘एक जना विदेशी पत्रकारले अन्तरवार्ताका लागि अनुमति मागेका थिए तर, हामीले मानेका थिएनौं ।’
कारागारका जेलर लक्ष्मी बाँस्कोटाले छानविनका क्रममा उनले अन्तर्वार्ता दिएको नदेखिएको दाबी गरे । उनका अनुसार पछिल्लो समय शोभराजसँग कसैले भेटघाट गरेका छैनन् ।
बरु उनले केही आफन्तलाई फ्रान्स, अमेरिका र बेलायतमा फोनचाहिँ गरेका छन् । ‘आफन्तसँग गरिएको कुराकानी नै पत्रकारसम्म पुगेर अन्तरवार्ताका रुपमा प्रकाशित भएको हो कि ?’, बाँस्कोटाको आशंका छ ।
केन्द्रीय कारागार सुरक्षा चिन्ता : शोभराजलाई कारागारभित्रको पनि कारागारका रुपमा चिनिने गोलघरभित्र राखिएको छ । यसमा उच्च सुरक्षा जोखिम रहेका कैदीबन्दीलाई राख्ने गरिन्छ ।
यस्तो सुरक्षित स्थानमा राखिएका व्यक्तिले अन्तर्वार्ता दिनुले कारागारमा सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाएको एक सुरक्षा अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार गोलघरमा भएका व्यक्तिले विनाअनुमति अन्तरवार्ता दिनुले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गराएको छ ।
‘यो घटना सार्वजनिक भएपछि उनैलाई पनि अन्तर्वार्ताबारे सोधेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, शोभराजले कसैलाई अन्तर्वार्ता नदिएको बताए । ’कारागारले उनको सम्पूर्ण गतिविधिको सीसी टीभी फुटेज पनि जाँच गरेको छ, त्यसमा पनि कोहीसँग भेट गरेको नदेखिएको उनले बताए ।
पटकपटक चर्चामा: शोभराजको जीवनीमा आधारित भएर ‘मे और चालस’ नामक फिल्म नै बनेको छ, द सर्पेन्ट नामक नेटफ्लिक्स सिरिज पनि छ । उनी भारत, अफगानिस्तान, ग्रीस र इरानका उच्च सुरक्षा घेरा रहेको जेल तोडेर भागेका थिए ।
कुनै वेला उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु’ भनेका थिए । यो अभिव्यक्तिलाई विमानस्थलको सुरक्षा कमजोरीलाई विश्लेषण गर्न अझै उदाहरणका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । शोभराजले जेलमै नेपाली नागरिक निहीता विश्वाससँग विवाह पनि गरेका थिए ।
छुट्न कम्तिमा पनि तीन वर्ष लाग्ने : विकिनी किलरका रुपमा चर्चित शोभराज २ असोज २०६० मा काठमाडौंको एक क्यासिनोबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत, भक्तपुरले कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । शोभराजले २१ डिसेम्बर १९७५ मा भक्तपुरमा आरमण्ड लरेन्ट क्यारियरे र त्यसको दुई दिनपछि कोनिजो ब्रान्ची नामक युवतीको हत्या गरेको अभियोग थियो ।
ओलिलाइ खतराको घण्टी ! यस्तो छ खास कारण (भिडियो सहित हेर्नुहोस् )
नुहाउदा नुहाउदै बाथरुममा बनाएको यो भिडियो राता रात भयो भाइरल = (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
२० बर्षे जवानीमा खुलेकी माल्भिका हेरौं ८ हट अवतारहरु